Does your organization need SOC team? – NEX4 Blog
Does your organization need SOC team?
💠 ဘဏ်တွေ ၊ Internet Service Provider (ISP) တွေမှာဆိုရင် 24/7 Network Monitoring အတွက် Network Operation Center (NOC) Team တွေရှိကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် 24/7 Security Monitoring အတွက် Security Operation Center ( SOC) Team ဆိုပြီး သီးခြားထားလေ့မရှိကြပါဘူး။ SOC အတွက် ကုန်ကျစရိတ်၊ Firewall, Intrusion Protection တွေ အစရှိတဲ့ Security Devices တွေရှိနေရုံနဲ့ Attacks , Threats တွေ ရန်ကနေ လုံခြုံနေပြီလို့ ယူဆထားတွေ စတဲ့ SOC Team မထားဖြစ်တဲ့ အကြောင်းအရင်းတွေများစွာရှိနိုင်ပါတယ်။
💠 Security Devices တွေက Attacks တွေ၊ Threats တွေကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အချိန်နဲ့ တပြေးညီ ကိုယ့်ရဲ့ IT Environment က အားနည်းချက် (Vulnerabilities ) တွေကို ရှာတွေ့ပြီး ပြုပြင်နိုင်ဖို့၊ Attacker တွေ တိုက်ခိုက်တာကို ချက်ချင်းသိပြီး တုံ့ပြန်နိုင်ဖို့(Incidents and Responses) စတဲ့ အပိုင်းတွေမှာ Security Devices တွေရှိနေရုံနဲ့ မလုံလောက်တော့ပါဘူး။ ဒါ့အပြင် Attack တွေ၊ Threat အသစ်တွေက အချိန်နဲ့အမျှ ထွက်ပေါ်လျက်ရှိပါတယ်။ ဒါတွေကိုမဝင်ရောက်နိုင်အောင် မျက်ခြေမပြတ် စောင့်ကြည့်နေဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
💠 ဥပမာ Threat အသစ်တစ်ခုက ကိုယ့် Organization ဆီ ဝင်သွားတာကို အချိန်တစ်ခုကြာမှ သိရတဲ့အခါ ဒီ Threat ကပျံ့နှံ့ပြီး Customers တွေကို ပေးနေတဲ့ Service တွေ Down သွားနိုင်ပါတယ်။ ဒါဆိုရင် Business Impact ရှိသွားပြီ။ ရလဒ်ကတော့ ကိုယ့် Services တွေကို သုံးနေတဲ့ Customer တွေက Complain တွေတက်လာပြီး Customer တွေကို ဆုံးရှုံးရမှာပါ။ ဒီလို ဆုံးရှုံးမှုနဲ့ယှဉ်ရင် SOC Team အတွက် ကုန်ကျသွားတဲ့ငွေက မပြောပလောက်အောင် နည်းပါးပါတယ်။
💠 အပြင်က Audit တွေလာစစ်တဲ့အခါ Audit Checklist အောင်ချင်တယ်ဆိုရင် SOC Team ကို မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါတယ်။ SOC Team ကသုံးတဲ့ Security Information And Event Management (SIEM) Tools တွေက ကိုယ့်ရဲ့ Organization Security က PCI DSS, GDPR, SOX သာမက အခြား Regulations အတွက် Compliance နဲ့ညီကြောင်း Security ပိုင်းဆိုင်ရာ Data တွေကို ထုတ်ပြပေးနိုင်ပါတယ်။ Audit Reports အတွက် အချိန်ကုန်ခံပြီး ပြင်ဆင်နေစရာ မလိုအပ်ပါဘူး။ SOC Team က Audit Success ဖြစ်ဖို့ကို အထောက်အပံ့ဖြစ်စေပါတယ်။
💠 ယခုလက်ရှိမှာတော့ NEX4 ရဲ့ SOC Team ဟာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ထိပ်တန်း Internet Service Provider (ISP) တွေရဲ့ Security Operation ပိုင်းကို 24/7 လုပ်ဆောင်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။ ကိုယ်ပိုင် SOC Team ထောင်ဖို့ ကုန်ကျစရိတ်တွေ၊ အချိန်တွေပေးမယ့်အစား လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ IT Environment ကို ကျွန်တော်တို့ရဲ့ NEX4 SOC Team ဆီ ငွေကြေးသက်သက်သာသာနဲ့ ယုံကြည်စွာအပ်နှံလိုက်ပါ… ✔✔